» हेटौँडामा थप २ जनामा कोरोना संक्रमण
हेटौँडामा थप २ जनामा कोरोना संक्रमण
२२ श्रावण २०७७, बिहीबार १२:२५
मकवानपुर, २२ साउन । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा थप दुई जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । आज बिहान प्राप्त रिपोर्टअनुसार हेटौंडाका दुईजना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
बुधबार नै पठाइएको नमूनामध्ये आज प्राप्त रिपोर्टअनुसार हेटौंडा–६ का ४९ वर्षीय पुरुष र हेटौंडा–१७ का ३१ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हेटौंडा–४, कर्रास्थित आइसोलेसन वार्डका ईञ्चार्ज डा. अर्जुन खड्काले जानकारी दिएका छन् । आज संक्रमित भएका दुबैजना हेटौंडा अस्पतालको ज्वरो क्लिनिकबाट रेफर गरेर पठाइएका व्यक्तिहरु भएको डा. खड्काले बताएका छन् । यी पुरुषहरुमध्ये हेटौँडा ६ का ४९ वर्षीय पुरुष सिमरामा कार्यरत रहेका थिए भने अर्का ३१ वर्षीय पुरुष प्रहरी चौकी हटियामा कार्यरत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
केहीदिन यता मकवानपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमणको दर बढेको छ । आइसोलेसन वार्डमा अहिले कोरोना संक्रमित ९ जना उपचाररत छन् । आजै आइसोलेसन वार्डबाट ३४ पुरुष र १७ महिलासहित ५१ जनाको स्वाब कोरोना परीक्षणका लागि किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा सञ्चालित प्रयोगशालामा पठाइएको छ । (समृद्ध समाज, खबर ब्रेक र सिधाखबरको सहयोगमा)